March 1, 2021 – Healthy Life Journal
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဦးခေါင်းကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာက စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ ဦးခေါင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးရင် ပေါ့ပေါ့ဆဆနေလို့မရပါဘူး။ ဦးခေါင်းကို မတော်တဆထိခိုက်မိသွားလို့ ဦးခေါင်းအပြင်မှာ ပွန်းရာလေးတောင် မရှိဘဲနဲ့တောင်မှ အတွင်းမှာ ကြီးမားတဲ့ ဒဏ်ရာရနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခေါင်းကို ထိခိုက်မိပြီဆိုတာနဲ့ သတိထားဖို့...
အသားအရေပေါ် သံပရာသီးစိတ်ပွတ်ပေးခြင်းဖြင့် ဝက်ခြံနဲ့ ဆားဝက်ခြံကို ကာကွယ်နိုင်
အသားအရေပေါ် သံပရာသီးစိတ် ပွတ်ပေးတဲ့အခါ ဝက်ခြံနဲ့ ဆားဝက်ခြံမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ သံပရာသီး ဒါမှမဟုတ် သံပရိုသီးကို ခပ်ပါးပါး တလွှာလှီးပြီး မျက်နှာပေါ်မှာ ညင်ညင်သာသာ ပွတ်ပေးပါ။ သံပရာသီးမှာ အစွမ်းထက် ဘက်တီးရီးယားသေစေတဲ့ အာနိသင်ရှိတာကြောင့် မျက်နှာပေါ်က ဘက်တီးရီးယားတွေကို ကင်းစင်စေကာ အသားအရေ...
သွေးတိုးတိုင်း စိုးရိမ်ရလား . . .
—–၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. သွေးတိုးရင် စိုးရိမ်ရပါသလား ဆရာ။ A. သွေးတိုးတိုင်း စိုးရိမ်ရလားဆိုတာမျိုး လူနာတွေက မကြာခဏ မေးလေ့ရှိပါတယ်။ သွေးတိုးတာနဲ့အတူ အသက်ရှူမဝတာ၊ မောတာ၊ နှလုံးထိခိုက်တာ၊ ရင်ဘတ်အောင့်တာ၊ သတိလစ်တာ၊...